2010: Iyo, Hazie, Kachasị | Martech Zone
Anyị juputara na ozi sitere na mgbasa ozi mmekọrịta, ọchụchọ na igbe ozi anyị. Mpịakọta na-aga n'ihu na-arị elu. Enweghị m ihe na-erughị 100 iwu na igbe mbata m iji zipu ozi na ozi ọma. Kalenda m na-emekọrịta n’etiti Blackberry, iCal, Kalịnda Google na Osisi. Enwere m Google Voice jikwaa oku azụmahịa, na Na Na Na ijikwa oku na ekwentị m.
Joe Hall dere taa na nchegbu na ojiji nke nzuzo data nkeonwe nke Google nwere ike iduga ya na mbibi onwe onye. Ahụrụ m akwụkwọ ozi Joe n'anya mana eji obi m niile ekwenyeghi na nke a. Ka m na-aga n'ihu na-eji Google, Achọrọ m ka ha tinye data ikpeazụ ọ bụla iji nye m nzaghachi akọwapụtara nke ezubere m. Achọghị m ịga site na nsonaazụ… nye m azịza m chọrọ.
Twitter na - enweghị nchịkwa… enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ, ndị ọrụ ibe, ndị ọkachamara na ọrụ m chọrọ ịgbaso mana iyi nke ozi ugbu a bụ ọkụ ọkụ. Obi dị m ụtọ, Feedera achoputara nke a dika ohere… ya mere enwere m ike isi na nke a:
Amụma m maka afọ 2010 bụ na arụpụtaghị ihe ọ bụla nyo, ebuli na hazie ọnụma ga-abụ. Continuedlọ ọrụ na-arịwanye elu nke ụlọ ọrụ ga-agbanyekwu ọrụ na obere akụrụngwa. Nrụpụta anyị ga-abawanye, ma anyị kwenyere na anyị nwere ikike ma ọ bụ na anyị enweghị.
Facebook na LinkedIn depụtaghachiri ụdị ndụ kachasị na Twitter nke mmelite ịkọ akụkọ. Blackberry na-e mimomi ahụmahụ a na ekwentị m na olu, email na facebook. Mgbe m hụrụ Mac m n’anya ma hụkwa ọmarịcha ọhụhụ iPhone nwere, ọrụ m na-abawanye. Achọghị m mara mma… Achọrọ m arụpụta. Ighaghari ihu na enyere aka na 2009, mana ugbu a, ha enweghị njikwa ma achọrọ m enyemaka na-akụda ha ka ha bụrụ akụkụ dị m mkpa.
Izu a, amalitela m ịrụ ọrụ na ChaCha. N'oge gara aga, anaghị m eji ọrụ ha arụ ọrụ; ma, agbakwunyela m 242242 na adreesị m ka m nwee ike ide ajụjụ ma nweta otu nzaghachi dị mkpa. Enwere otutu afọ ojuju ugbua… mgbe m na-anya ụgbọala m nwere ike ịjụ adreesị, akara ekwentị, oge nchekwa, wdg. Ekwesighi m ịchọ, nyocha, wee banye weebụsaịtị. Achọrọ m azịza ya answer otu azịza.
Abụghị m naanị otu. Uto nke ihe di nkpa, ajuju ajuju di ngwa ngwa na Google. Ekwenyere m na omume ọchụchọ ga-aga n'ihu na ntụzịaka a - yana ọrụ iji nyochaa nsonaazụ kacha mma bụrụ ihe bara uru karị.
N'ihi ya, amụma m maka 2010 ga-abụ plethora nke ngwaọrụ dị egwu na ịrị elu iji nyere ụlọ ọrụ na ndị na-azụ ahịa aka nyocha, bulie ma hazie ahụmịhe ha n'ịntanetị. Nke a bụ ihe ọzọ na-egbu ndị ahịa - ọ pụtara na ozi ha aghaghi ịbụ Ọzọ dị mkpa, n'oge, na dị mkpa… ma a ga-asachapụ ya.
Tags: 2010kalendammekọrịta kalendanyoolu googlehalllọ joeebulihazieAmụmaozi ịntanetị
Dec 12, 2009 na 8:52 PM
egbu egbu post!
Dee 13, 2009 na 8: 38 AM
Ekwenyesiri m ike na Twitter nwere ike bụrụ nke a na-agaghị achịkwa ma na ọdịnihu dị mma maka ngwaọrụ dịka nke a tụlere ebe a.